Home Wararka Boobka hantida qaranka oo faraha ka sii baxaya iyo MW. Farmajo oo...
Boobka hantida qaranka oo faraha ka sii baxaya iyo MW. Farmajo oo dhagaha ka xirtay (Daawo Video)
Wasiirka Gaadiidka DF aya lagu soo eedeeyay boob xatooyo xoolo qaran isagoo lunsaday lacag kor u dhaafeysa $1 Milyan iyo shan boqol oo kun oo doollar labadii sano ee hayay hoggaanka wasaaradda gaadiiska JFS.
Wasiirka aya sameystay shirkad uu isaga si qaas ah u leeyahay taasoo gebi ahaanba qaadata daqligii wasaaradda in ka badan 60%. Sida MOL ay u sheegeen dad xog ogaal u ah, waxaa wasiir Oomaar la leh shirkadda nin magaciisa lagu sheegay Ismaaciil Gooni oo ay qaraabo yihiin RW Kheyre kana dhexeyso ganacsi.
RW Kheyre ayaa dhowr jeer oo hore dacwado uga yimid shaqaalaha wasaaradda gaadiidka uu iska indha tiray, iyadoo bedelkeeda shaqada laga ceyriyay shaqaalahii ka dacwooday Wasiir Oomaar.
Waxaa xabsiyo kala duwan lagu xukumo shaqaale hore uga tirsanaa dekedda iyo wasaaradda maareynta masiibooyinka, balse sharciga ma loo siman yahay ayeey is weydiinayaan shacabka.
Hantidhowrka Qaranka ayaa soo gudbiyay musuqa wasiir Oomaar, balse waxaa dhagaha ka fureystay RW Kheyre iyo MW. Farmaajo, waxaana la aaminsan yahay in ay ka ogyihiin waxna ka leeyihiin shirkadaha been abuurka ah ee lagu dhaco hantida qaranka.
Previous articleIsmaaciil cumar geelle oo bogaadiyay Abiyi Axmed
Next articleWararkii ugu Dambeeyay Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu qarxiyay Gobolka Gedo
(Xog) Madaxweynaha Puntland oo iclaamiyay shir lagu badbaadinayo xaaladda siyaasadda ee...